Waddooyinka Muqdisho oo dib loo furay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWaddooyinka Muqdisho oo dib loo furay
June 17, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Waddooyinka Muqdisho oo dib loo furay. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa dib loo furay kadib dhowr maalmood oo ay xirnaayeen.
Waddooyinka ugu mashquulka badan Muqdisho sida wadada Maka Al-Mukarama ayaa maanta waxaa adeegsanaya gaadiidka iyo dadka.
Maalmihii ugu dambeeyay, dadka Muqdisho ayaa ka cabanayay xirnaanshaha waddooyinka, iyada oo ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay xireen waddooyinka ugu muhiimsan isku socodka magaalada.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Culimada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa codsaday in dadka Soomaaliyeed loo fududeeyo gudashada Xajka. Shir saxaafadeed ay culimada Arbacadii qabteen, ayay ka codsadeen dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, diyaaradaha ganacsiga iyo dhammaan cid walba [...]